ikhaya/11 Windows/Sebenzisa iNdlela eMnyama kwangoko kwiWindows 11
Vangelis29. Agasti 2021
Uninzi lwezicelo zibonelela ngemowudi yendlela emnyama. Ungayisebenzisa le ndlela yokubonisa ngeWindows 11. Oku kuluncedo kakhulu xa amehlo ethe ethe ethe kwaye efuna ikhefu. Ngokusebenzisa imowudi emnyama, izinto ziyaqaqanjiswa ngemvelaphi emnyama. Siza kukubonisa ukuba ungayisebenzisa njani le ndlela kwi-Windows 11 imiyalelo
Indlela emnyama kwiWindows
1 Indlela emnyama kwiWindows
2 Sebenzisa iNdlela emnyama kwiWindows 11
3 Khubaza indlela emnyama kwiWindows 11
Ngokusebenzisa ifayile ye Imoya Yomnyama Imisebenzi phantsi kweWindows 11, iiwindows nazo ziyavela kwifayile ye- uyilo olumnyama. Lo msebenzi uluncedo ngamehlo abuthathaka, umzekelo xa B. ngokuhlwa ikhompyutha Ndifuna ukusebenza.
Sebenzisa iNdlela emnyama kwiWindows 11
Cofa ekunene kwindawo engenanto kwidesktop kwaye ukhethe ngokwezifiso.
Kwifestile evuliweyo cofa imibala
Kuloo ndawo Khetha imowudi khetha imenyu ehlayo "Mnyama" ngaphandle.
Ungawusebenzisa lo msebenzi nge Useto lweWindows 11 errece.
Kwangelo xesha, duck indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Iwindows + I.
Khetha ngasekhohlo "Eyakho" ngaphandle.
Qhubeka ucofa Imibala.
Imibala yekrini iyavula. Ukusuka apha, cofa imenyu ehlayo kwaye ukhethe "Mnyama".
Ukusukela ngoku ukuya phambili, iWindows 11 iyasebenza Imo emnyama kwikhompyuter yakho iphela.
Khubaza indlela emnyama kwiWindows 11
Ukuba unayo Imo emnyama awusayi kuyidinga Ungayicima kwaye uye ku Imodi yokuKhanya ukubuya. Yiya e Useto> Ukwenza ubuqu> Imibala. Emva koko cofa imenyu ehlayo kwaye ukhethe "Qhakazile" ngaphandle.
Windows 11 -yiphi inguqulelo efakiweyo?
Yenza i-HDR kwi-Windows 11-imiyalelo
kwimodi emnyama uyilo olumnyama 11 Windows
Yenza i-USB bootable stick Windows 11